Ambroxol (အမ်ဘရိုဇော) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ambroxol (အမ်ဘရိုဇော)
Ambroxol (အမ်ဘရိုဇော) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ambroxol (အမ်ဘရိုဇော) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ambroxol ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Ambroxol ဟာ ချွဲကြေဆေး တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အဆုတ်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ လေပြွန်ရောင်ရောဂါ ၊ အဆုတ်လေအိတ်လေးများ ပျက်စီးသောရောဂါ၊ ဖုန်မှုန့်သတ္တုမှုန့်များ ရှူမိသောကြောင့်ဖြစ်သော အဆုတ်ရောဂါ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ၊ လေပြွှန်မကြီးနှင့်လေပြွန်ငယ်များရောင်သောရောဂါ၊ လေပြွန်ကျယ်အဆုတ်ရောဂါ၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်းနှင့်ကျဉ်းခြင်း တို့ပါဖြစ်နေသော ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ တို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Ambroxol ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Ambroxol ကို အစာ နဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပေါ်က အညွှန်းစာကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ မရှင်းတာရှိရင် ဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ မသက်သာရင် (သို့) ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ သင့်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ရှိတယ်လို့ထင်ရင် ကျန်းမာရေးအကူအညီ ယူသင့်ပါတယ်။
Ambroxol ကို နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံး သိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့ နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ Ambroxol ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Ambroxol ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။
Ambroxol ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ambroxol ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Ambroxol မသောက်ခင်မှာ အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေအကုန် (ဗီတာမင် အပါအဝင်)
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိကို မသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများ နှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။
Ambroxol က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Ambroxol နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Ambroxol ဟာ သင် အခုလောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့ စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာ၀ ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Ambroxol နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Ambroxol က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Ambroxol နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Ambroxol ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Ambroxol ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
၆၀-၁၂၀ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်သောက်ရန် ၊ နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်အထိ ခွဲသောက်ရန် ။
ကလေးငယ်တွေမှာ Ambroxol ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အသက် ၂ နှစ်။ ။ ၇.၅ မီလီဂရမ် နှစ်ကြိမ်ခွဲသောက်ရန်
၂-၅ နှစ်။ ။ ၇.၅ မီလီဂရမ် နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ်ခွဲသောက်ရန်
၆-၁၂ နှစ်။ ။ ၁၅ မီလီဂရမ် နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ်ခွဲသောက်ရန်
Ambroxol ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Ambroxol ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား။ ၃၀ မီလီဂရမ်
သောက်ဆေးရည်။ ၅ မီလီလီတာ တွင် ၃၀ မီလီဂရမ်
ထိုးဆေး။ ၂ မီလီလီတာ တွင် ၁၅ မီလီဂရမ်
ရှူဆေး။၂ မီလီလီတာတွင် ၁၅ မီလီဂရမ်
Ambroxol ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Ambroxol Hydrochloride. https://www.drugs.com/ambroxol.html. Accessed Aug 15, 2016.
Ambroxol. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ambroxol#section=Top. Accessed Aug 15,
Ambroxol and bromhexine-containing medicines.
Accessed Aug 15, 2016.